कार्यकारी निर्देशकविरूद्ध खनिए डा.भक्तमान – Chitwan Post
भरतपुर । वीपी कोइरला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको १४ औं स्थापना दिवस र ९ औं राष्ट्रिय क्यान्सर सतर्कता दिवसका दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कम सहभागी देखिएपछि अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.भक्तमान श्रेष्ठ सुरूमै कार्यकारी निर्देशकविरूद्ध खनिए ।
बोल्दै जाँदा उनले सरकार र पत्रकारलाई पनि छाडेनन् । एक वर्षअघि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका डा. श्रेष्ठ त्यसअघि अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनको ठाउँमा डा.लक्ष्मीनारायण सिंह कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि श्रेष्ठले सजिलै पद त्याग्न पनि मानेनन् ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएपछि डा.सिंह र श्रेष्ठबीचको मनमुटाव हटेको मानिएको थियो, तर वार्षिकोत्सव जस्तो महत्वपूर्ण समारोहमा श्रेष्ठ डा. सिंहमाथि खनिए । त्यो पनि हलमा मान्छे कम भएको बाहना बनाएर ।
‘हलमा सहभागी कम भए । सबै विभागलाई भनेर धेरैभन्दा धेरै सहभागी जुटाउनु पर्दथ्यो । यो कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हो । खै, उहाँले किन त्यसो गर्नुभएन’ अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले तितो पोखे । अस्पतालमा बिरामी कम भयो भनेर उनले टिप्पणी गर्न चुकेनन् ।
‘बहिरंग विभागमा आउने बिरामीहरुको संख्या केही बढेको पाइयो, तर कार्यकारी निर्देशकज्यूको प्रतिवेदनअनुसार अन्तरंग विभागमा आउनेहरुको संख्या घटेको छ, यस्तो हुनु हुँदैन थियो’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
डा.श्रेष्ठ स्थापना कालदेखि नै क्यान्सर अस्पतालसँग जोडिएका छन् । उनी अस्पतालको वरिष्ठ सर्जन पनि हुन्, तर पहिला कार्यकारी निर्देशक र हाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका डा. श्रेष्ठ अचेल निजी अस्पतालमा समय बिताउँछन् । बेथितिका लागि भने उनले कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवार ठहराए ।
नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिइए पनि राजनैतिक खिचातानीका कारण अस्पताल पछिल्लो समय अस्त–ब्यस्त बन्दै गएको छ । अस्पतालबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष ९४ हजार ७८८ बिरामीले ओपीडीमा सेवा लिएका थिए । अस्पताल आउनेमा कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेहरुको बाहुल्य छ ।
अस्पतालमा आउने बजेट कटौती गरेको भनेर डा.श्रेष्ठ सरकारप्रति पनि आक्रमक बने । ‘हाम्रो बजेट त्यसै त अपुग थियो । त्यसमाथि यो वर्षको बजेटमा सकारले २७ प्रतिशत कटौती गरेछ । १८ प्रतिशत तलब बढेका बेलामा यस्तो कम बजेट पठाएर के गर्नु’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
कार्यकारी निर्देशक डा.लक्ष्मीनारायण सिंह अस्पताल सञ्चालका लागि गत वर्ष ७२ करोड ६६ लाख २८ हजार ५१३ रूपैयाँ खर्च भएको बताउँछन् । जसमा अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी जम्मा नौ करोड सात लाख ५० हजार ६४२ रूपैयाँ रहेको थियो । अस्पताललाई सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
पाँच करोड बाहेक पनि स्वास्थ्यकर कोषबाट २९ करोड ४२ लाख प्राप्त भएको कार्यकारी निर्देशक डा.सिंहले जानकारी दिए । उनले भने ‘सवैबाट गरेर हाम्रो कूल आम्दानी ४३ करोड ५४ लाख रूपैयाँ छ । हाम्रो खर्च ७२ करोड रूपैयाँभन्दा पनि धेरै छ । यस्तो घाटा बजेटले अस्पताल धेरै समय चल्न सक्दैन । त्यसैले हामीले आम्दानी बढाउन सेवा शुल्कवृद्धि गर्न लागेका छौँ ।’
कार्यकारी निर्देशक र सरकारपछि क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भक्तमान श्रेष्ठ पत्रकारप्रति खनिए । ‘पत्रकारहरुले अस्पतालको सकारात्मक कुरा लेख्दै लेखेनन् । सधैँ नकारात्मक कुरा लेख्न छाडेर सकारात्मक कुरा पनि छाप्ने गर्नू’ डा.श्रेष्ठको आग्रह थियो । पछिल्लो समय अख्तियारको निगरानीमा परेका श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक प्रकरणपछि धेरै आलोचित बनेका थिए ।
नेपालमा क्यान्सर उपचार हुने मुख्य अस्पताल बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको औपचारिक उद्घाटन विसं. २०५७ साल असोज १० मा भएको हो । अस्पताल उद्घाटनको दिनलाई नौ वर्षदेखि राष्ट्रिय क्यानसर सतर्कता दिवसको रुपमा मनाउँदै आइएको छ । चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा अस्पताल स्थापना भएको हो ।